Lionel Messi oo labo daqiiqo gool ku dhaliyey markii uu xalay kursiga keydka ka soo kacay, una sii dhowaanaya Suarez – Gool FM
Haaruun February 8, 2021
(Betis) 08 Feb 2021. Lionel Messi ayaa labo daqiiqo oo qura gool ku dhaliyey kaddib markii uu ka soo kacay kursiga keydka, waxaana uu haatan ku sii dhowaanayaa inuu soo qabto saaxiibkiisa Luis Suarez oo hoggaaminaya gooldhalinta horyaalka La Liga.
Ronald Koeman ayaa u baahday saameyn, maadaama Barcelona ay booqatay garoonka Estadio Benito Villamarin, isla markaana Lionel Messi ayaa saameyn sameeyey.
Waxa uu soo galay garoonka daqiiqaddii 57-aad, waxaana Messi oo ka soo istaagay kursiga keydka uu dhaliyey gool daqiiqaddii 59-aad, kaddib markii uu si caqliyeysan u dhammaystiran kubbad ka timid dhinaca koornada.
Waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo uu Messi ku soo bilowdo keydka tan iyo kulankii hore ee ay la ciyaareen Real Betis 07 bishii November, markaasoo sidoo kale uu soo galay isla markaana uu gool dhaliyey, waxaana uu sidaa sameynayaa labo jeer munaasabaddaas.
Goolka uu xalay dhaliyey ayaa la micno ah in Messi uu la jaan qaadayo saaxiibkiisa dhow ee Luis Suarez, kaasoo hal gool oo kaliya kaga hoggaaminaya tartanka loogu jiro gooldhalinta horyaalka La Liga ee Pichichi.
Youssef En-Nesyri oo ka tirsan Sevilla ayaa la goolal ah Messi oo ku jirta kaalinta labaad ee gooldhalinta horyaalka La Liga, waxaana ay wadaagaan min 13 gool, halka weeraryahanka reer Uruguay ee Suarez uu horyaalka ka dhaliyey 14 gool fasal ciyaareedkan.
Muxuu Pep Guardiola ka yiri kaddib guushii taariikhiga ahayd oo ay Manchester City ka gaartay Liverpool?